कसले भन्यो बिधार्थीले अस्ट्रेलीयामा पन्द्र सय डलर हप्ताको कमाउँछ भनेर? « Khasokhas Follow @khasokhasmag
कसले भन्यो बिधार्थीले अस्ट्रेलीयामा पन्द्र सय डलर हप्ताको कमाउँछ भनेर?
प्रकाशित मिति : चैत्र ५, २०७४ सोमबार
म एउटा सामान्य बिधार्थी अस्ट्रेलीया पढ्न भनेर आएको छु। कलेज त्यस्तै भाग्यमानी भैयो भने दुई दिन अन्यथा तिन वा चार दिन त जानै पर्छ। पहिलो कुरो बिधार्थीले हप्ताको बिस घण्टा भन्दा काम गर्नै पाईदैन ट्याक्समा। यदि क्यासमा कसैले पाए भने अपबाद बाहेक केहीले थोरै घण्टा बढि काम गर्लान। बिशेष बिधार्थीहरुले आफुले पढेको बिषयमा अक्सर काम पाउँदैनन्। नपाउने भन्ने पनि छैन। कोहीले फेरी स्टुडेन्ट भिषामा रहँदा पनि बैकमा वा अन्य राम्रै कम्पनीमा कामपनि पाएका छन्। त्यसको लागि आफैले मेहीनत, लिङ्क र अथक प्रयास गर्नै पर्छ।
प्राय बिधार्थीहरुले काम पाउने वा गर्ने भनेको क्याफेमा वेटर वा वेट्रेस, हाउसकिपीङमा रुम एटेन्डेन्ट, हाउसमेन वा सुपरभाईजर, क्लिनीङ, कार वास, किचन हैण्ड, कस्टुमर सर्भीसेजनै हुन्। धेरैले घण्टाको रेट अनुसार काम गर्छन्। अस्ट्रेलीयामा कम्तीमा पनि $१८.२९ ट्याक्समा दिने पे रेट हुन्छ। क्यासमा गर्नेहरुले यो भन्दा कममानै गरेका हुन्छन्। अब कोही काम गर्न ज्यामाराजनै छन् कलेज, काम र थकानको कुनै परबाहनै गर्दैनन् काम गर्ने बिभीन्न ठाउँमा तालिका मिलेको छ भने अलिक बढि कमाउलान्।
हुण्डीमा पैसा पठाउने अक्सर बिधार्थीनै बढि हुन्छन् किनकी उनीहरुलाईनै आएको खर्च र लागेको तिरोभरो गर्न हतार हुन्छ।
एउटा सामान्य बिधार्थीले बिस घण्टा $१८.२९को दरले काम गर्यो भने हप्ताको $३६५.८० कमाउँछन्। योनै धेरैले कमाउने पैसा हो हप्ताको बिधार्थी कालमा।
कमाएको मात्र देखेर भएन। खर्च पनि त हेर्नु पर्यो। सामान्य एकजनाले मेल्बोर्नमा कोठाको महिनाको $३५० तिर्नै पर्छ। थपघट होला घर हेरेर। सेयरिङमै हो बस्ने प्राय। खासै एक्लै कोठा लिएर बस्ने पुगीसरी पनि आएको हुँदैन। मुखमा माड हाल्नै पर्यो। रासनमा केही नभएको पनि एकजनाले त्यो पनि एकछाक खाँदा $२५० डलर आजको परिस्थितीमा। अब विकेण्डमा साथीभाई बोलाएर दारु, मिठा परिकार खान पर्यो भने केही बढ्ला। म कुरा मेल्बोर्नको गर्दैछु। कलेज काम जानै पर्यो। दैनिक माईकी कार्ड ट्रेन ट्राम र बसको लागि तिर्दा महङ्गो पर्छ। धेरैले महिनाको एकै चोटी तिरेर महिनावारी पास बनाउँछन् जसको $१५५ पर्छ। घरमा ईन्टरनेट जोडिएको हुन्छ त्यसको कम्तीमा पन्द्र डलर छुट्याउनै पर्यो।
अर्को सबै भन्दा मुख्य कुरो लिने बेला मख्ख परेर पासपोर्ट र सिवई देखाएर लिएको आईफोन र नोटको महिना मरेको दिन टुप्लुक्क $१०० डलर काट्छ। अब त्यो कुनबाट कतिको प्लानमा लिएको त्यसले दस बिस डलर तलमाथी होला तर जसो गरेनी सय डलर मोबाईल फोनले खान्छ भन्दा म गल्ती हुँदिन होला।
सधै घरबाट खाजा बोकेर जान पनि अल्छी लाग्छ, कामको थकानले बनाउन अल्छी लाग्छ। लामो र एउटै शिक्षकको अनुहार बिगान नौ बजे देखी पाँच बजे सम्म हेर्दा भोक लाग्नु स्वभाबिकनै हो। यसो बाहीर गएर म्याक, हङ्ग्री ज्याक्स वा क्याफे त्यो पनि खल्तीमा कति छ त्यसले फरक पार्छ। गएर खाँदा कम्तीमा पनि महिनाको एकसय पचास पर्छ। एकदमनै कन्जुस गएर खाँदा पनि। कोही खाँदै नखाने छन् भने केही बढि जोगाउलान्।
यी देखि बाहेक घरको बिजुली बत्ती, ग्याँस अनि पानीको बिल पनि भाग लगाएर तिर्नै पर्यो त्यसको कति चलाईएको छ त्य अनुसार कुनै मासिक, द्वैमासीक र त्रैमासीक बिल आउँछन् त्यसको लागि पनि खर्च छुट्टाउनै पर्यो।
ल भन्नु होस् $३८० हप्ताको कमाईले महिनाको $३८०ले चार हप्ताको $१५८० कमाउँछन्। भाडामा $३५०, माईकी पासमा $१६०, मोबाईलको बिल $१००, खाजा खर्च $१००, अरु बिलहरु मानौ $१८०ले पनि करिब ८९० तिर्नै पर्छ। त्यो देखी बाहेकको खर्चको त कुरै नगरौ। यी त घुँडा धसेर हुन्छ कि किड्नी बेचेर हुन्छ तिर्नै पर्छ। रमाईलोको लागि गरिने खर्च त भाँडमा जाए।
एउटा सामान्य बिधार्थीले बिधार्थी कालमा पैसानै कहाँ जोगाउँछ र। उता नेपाल तिर सेमेस्टर भनिने छ महिनाको सेमेस्टर यता खुम्चिएर तिन महिनाको हुन्छ। तिन महिनामा कलेजको फी जम्मा गर्ने कि आउँदाको ऋणपो घटाउने कि, घरमा केही भएनी छोरा छोरी अस्ट्रेलीया गएका छन् भनेर आस राख्छन् खर्च पठाउनै पर्यो।
लौ भन्नु होस् त अब कसरी एउटा बिधार्थीले हप्ताको पन्द्र सय डलर कमाएर कसरी घर पठाउँछ। हप्ताको पन्द्र सय कमाउनलाई एउटा बिधार्थीले फुल टाईम ३८ घण्टा काम गर्यो भने घण्टाको कम्तीमा $३८ हुन पर्छ र यो पे भनेको कि त अफिसर वा मेनेजर वा अलिक ठुलो अहोदामा पुग्नै पर्छ। बिधार्थी कालमै त्यहाँ पुग्नू भनेको कि त कायापलट नै हुन पर्छ कि त आफ्नै ससुरालीको कम्पनी हुन पर्यो।
त्यसैले नेपालमा हुने अभिबावक अनि पठाउने कन्सल्ट्यान्सीले बुझ्नै पर्छ कि अस्ट्रेलीयामा पैसा फल्दैन। कसैले यति र उती कमाउँछ भने कि त गफ लायो कि त यथार्थ लुकायो भनेर बुझ्नु होस्। हल्लाको पछि नलागौ बास्तबिकता बुझ्ने कोशीस गरौ अनि बल्ल पठाऔ आफ्ना छोरा छोरीलाई।